A Lake State of Mind | Myanmar Business Today
Home Business Local A Lake State of Mind
A Lake State of Mind
Travel for pleasure has become more common among people in Myanmar as information about travel destinations becomes more and more readily available on the internet.
The government, for its part, has been working to create new tourist destinations. Among them, let me recommendaplace of untouched natural beauty, the home of the Kayan people.
Kayah State is 448.9 kilometers from Yangon and connected to it by good roads. Thanks to VIP buses, traveling in Kayah State is comfortable, and there are various places to visit, such as Taung Kwe Pagoda, Kyat Cave, and Naungya night market.
A Kayah State landmark, Taung Kwe Pagoda offers beautiful views of the city in the morning and evening.
The state also has many lakes with clear blue waters. Perhaps some of these were originally man-made rainwater reservoirs, given that the rocky soil makes well-diggingatough job. Of Kayah’s many lakes, Nyaungya is one of the most popular, with food stalls springing up at night to offer visitors delicious food to enjoy while admiring the beautiful sights around them.
Another exciting place with amazing views is Kyat Cave.
Despite being connected to the power grid, lighting the cave is said to be impossible due to frequent light bulb failures. Visitors therefore need to bringaflashlight and be careful of snakes. It can also be chilly once you enter the cave. Inside, you will seea15-foot rock coffin. You are not supposed to take anything from the cave, and if you do, it is believed that spirits will follow you and ask for it back!
Our visit to Kayah State luckily coincided with the weekly market day at Be Naung Ya Market, where organically grown fruits and vegetables are sold. Another must-visit is Naungya Market, where you can enjoy the justly famous rice salad with fish. Fruits and vegetables here are way cheaper than in Yangon.
Next on the recommended list is Htee Se Khar Waterfall, located in the border area with Shan State. Wildly beautiful with wide waters, the place is good for relaxation. Shops are located nearby but separate from the waterfall. Disappointingly, there are man-made conditions there.
Loikaw, the state capital, hasanumber of signature dishes, the most famous being Kayah sausage, stuffed withamixture of pork and local chilies.
A mere 45-minute drive from the capital is Demawso City, whose markets offer delicious grilled pork. From there you can visit the legendary Ngwe Taung Dam, whose clear waters instillasense of calm in visitors. The name is derived from one of the three nearby mountains: Shwe (Gold), Ngwe (Silver) and Badamyar (Ruby). There is also Umbrella Lake, from whose bottom umbrella-shaped bubbles are said to pop up. Unfortunately for us, we didn’t see any during our visit.
Places to visit in Demawso are more numerous than in Loikaw. The Seven Stages Lake, which you can find on Google Maps, is good for selfie lovers.
A visit to Panpat Village is also recommended. This is where the world-famous, neck ring-wearing Kayah people live. The village has made arrangements to allow visitors to witness the local way of life. There are also souvenirs you can buy and take home.
Other amazing places you can visit include Baluchaung Hydropower Plant and Lawpita Power Plant, which playacritical role in the country’s power supply. To enter, you need to provideacopy of your ID.
Since 2015, authorities have been working to promote Kayah State asatourist destination, and their efforts have borne some fruit.
ကယားကလည်စရာ ငေးစရာ စားစရာကောင်းကောင်း
မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနိုင်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေက ခရီးတွေ ပိုသွားလာကြာ ပါတယ်။ ခရီးစဉ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေလှိုင်လှိုင် ရတာကြောင့်လည်း ပြည်တွင်းခရီးသွား အရေအတွက်လည်း ပိုတိုးလာစေပါတယ် ။
ခရီးသွားစရာနေရာအသစ်တွေအစိုးရက ဖော်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း သွားစရာနေရာတွေက ပိုမိုများလာပါတယ်။ ဒီလိုခရီးတွေထဲမှာမှ အရိုင်းဆန်တဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကယန်းလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ ကယားပြည်နယ်ကို သွားလည်ဖို့ ညွန်းပါရစေ။
ကယားပြည်နယ်က ရန်ကုန်နဲ့ ၄၄၈ ဒသမ ၉ ကီလိုမီတာကွာဝေးပါတယ်။ ကားလမ်းတွေကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကားလိုင်းတွေကလည်း VIP ကားလိုင်းတွေပါရှိတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ခရီးမပန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မှာဆိုရင် တောင်ကွဲစေတီ၊ ကြတ်ဂူ နဲ့ နောင်ယားကန်ဘေးမှာရှိတဲ့ နောင်ယားညဈေးတို့ဟာ သွားလည်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေပါ။
တောင်ကွဲစေတီက ကယားပြည်နယ်ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မနက်ခင်းစောစောနဲ့ ညနေခင်းတွေမှာဆိုရင် လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ အလှကို အပေါ်စီးကနေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားမိသလောက် ဒီပြည်နယ်မှာထူးခြားချက်က ရေကန်တွေ အရမ်းများတာပါ။ ဒီရေကန်တွေမှာ ရှိတဲ့ ရေအရည်အသွေးကလည်း ရေကန်တွေရှိပြီး ရေတွေကလည်း ပြာလဲ့နေတာပါ။
ကယားက ရေတွင်းတွေတူးရခက်ပြီး မြေအောက်မှာ ကျောက်သားများတာကြောင့် ရေရရှိဖို့အခက်အခဲရှိတာ ကြောင့် မိုးရေခံဖို့ ကန်တွေအများကြီးတူးထားပုံရပါတယ်။
အဲဒီကန်အများကြီးထဲကမှ နောင်ယားကန်က နာမည်ကြီးပါတယ်။ ညနေပိုင်းဆို ကိုးရီးယားအကင်တွေ ၊ ငါးကင်တွေနဲ့ ကယားဝက်အူချောင်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်။ ကန်အလှကိုငေးလိုက် အစားအသောက်စားလိုက် နဲ့ စိတ်အပန်းဖြေစရာဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုသာယာတဲ့ရှုခင်းတွေရှိသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေရာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဂူထဲမှာ မီးကြိုးတွေသွယ်ထားပေမဲ့ မီးထွန်းလို့မရပါဘူး။ မီးလုံးတွေက ထွန်းထားလည်း ခဏနေသအလိုလို ကျွမ်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကြတ်ဂူထဲကို ဝင်မယ်ဆိုရင် ဓါတ်မီးဆောင်သွားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ပြီးရင် မြွေအန္တရာယ်လည်း သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ကြတ်ဂူအဝင်လမ်းက ကျောက်ဂူထဲမှာ တံတားလေးတွေကို ဖြတ်သွားရပါတယ်။ ဂူဝင်တာ ဖြစ်လို့ ချမ်းစိမ့်တဲ့ခံစားချက်ကို ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ဂူထဲမှာ ၁၅ ပေလောက်ရှည်တဲ့ခေါင်းတလားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဂူထဲက ပစ္စည်းတွေကို ယူသွားရင် မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပြန်လိုက်တောင်းတယ်လို့လည်း ပြောလေ့ရှိကြပါတယ် ။ စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ကြတ်ဂူကို မဖြစ်မနေသွားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ သွားတဲ့အချိန်မှာ ကံကောင်းစွာနဲ့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပဲဖွင့်တဲ့ ဘဲနောင်ယားဈေးနေ့ကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ လွိုင်ကော်နားက ရွာတွေက ကိုယ်တိုင်စစ်ထားတဲ့ အသီးအနှံ ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီး တိုင်းရင်းသားအဖွားအိုတွေ ၊အမျိုးသမီးတွေက လာရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ဈေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နောင်ယားဈေးမှာဆိုရင် ငါးထမင်းနယ်က နာမည်ကြီးပါတယ်။ ငါးထမင်းနယ်ကို မြည်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရန်ကုန်မှာ တစ်စည်းကို သုံးရာအနည်းဆုံးပေးရတဲ့ ဂေါ်ရခါးညွန်တို့ ကိုက်လန်တို့ က နောင်ယားဈေးမှာ တစ်စည်းကိုမှ တစ်ရာတည်းပါ ။
ပြီးတော့ လိမ္မော်သီးတွေဆိုလည်း တစ်ပိသာမှ ၁၅၀၀ ကျပ်ဘဲရှိပါတယ်။ တစ်ပိသာဆိုရင် ပျှမ်းမျှ ၁၅ လုံးလောက်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ နောက်ထပ်လည်စရာက ကယားပြည်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်မှာရှိတဲ့ ထီးစဲခါးရေတံခွန်ပါ။ တကယ်ကို အရိုင်းဆန်တဲ့ရေတံခွန်ပါ။ ရေတံခွန်က သေးသေးလေး မဟုတ်ဘဲ ရေပြင်အကျယ်ကြီးနဲ့ အရမ်းကို အပန်းဖြေဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ။
ဒါပေမဲ့ သဘာဝအလှတရားကို အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ သဘောမကျချင်စရာအချက်ပါ။ အမှိုက်တော့ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ဈေးရောင်းဖို့ နေရာလည်း သပ်သပ်ထားထားပေးပါတယ်။
လွိုင်ကော်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့အစားအစာတစ်ခုကတော့ ကယားဝက်အူချောင်းပါ ။ ဝက်အူထဲမှာ ကယားပြည်နယ် ထွက်အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ မက်ခါသီးနဲ့ နယ်ထားတဲ့ ဝက်သားတွေကိုထည့်ထားတာပါ။
ပြီးရင် ကယားဟင်းထုတ်၊ ကယားခေါင်ရည်နဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကယားဝက်အူချောင်းကို ရန်ကုန်ကိုသယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ပြီးမှာထားရပါတယ်။ ဒီနေ့လိုချင်လို့ ဒီနေ့ဝယ်လို့မရပါဘူး။
လွိုင်ကော်မှာလည်ပြီးရင် လွိုင်ကော်ကနေ ၄၅ မိနစ်သွားရတဲ့ ဒီမေားဆိုးမြို့နယ်ကို သွားလည်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီးမေားဆို့ဈေးနေ့မှာ ဒီးမေားဆို့ဈေးထဲမှာဆိုရင် ဝက်သားကင်က အရမ်းစားကောင်းပါတယ်။ တဆက်တည်းဒီးမေားဆို့ မြို့နယ်ထဲမှာပဲ ငွေတောင်ဆည်က ရှိပါတယ်။ ငွေတောင်ဆည်က ရေပြင်အကျယ်ကြီးနဲ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတာအမှန်ပါ ။
ငွေတောင်ဆည်ဆိုတာက ဆည်နားက တောင်တွေကို အစွဲပြုပြီးခေါ်တဲ့နာမည်ပါ။ ဆည်နားမှာ ရွှေတောင်၊ ငွေတောင်၊ ပတ္တမြားတောင်ဆိုပြီး တောင်သုံးလုံးရှိပါတယ်။
ပြီးရင် ထီးပွင့်ကန်ကို သွားလည်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့သွားတဲ့အချိန်မှာ ထီးပွင့်က သိပ်မမြင့်ရသေးပါဘူး။ ကန်ထဲမှာ ဓါတ်သတ္တုတစ်ခုခုရှိပုံရပါတယ်။ ကန်ထဲက နှုန်းမြေတွေက ရေပွတ်လေးတစ်ခုကနေ တက်လာပြီး ထီးပွင့်ကြီးလို့ ဖြစ်လာတာပါ။
ဒီးမေားဆို့ကတော့ လွိုင်ကော်ထက် လည်စရာပိုများပါတယ်။ ချည်ဆိုတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ ကန်ခုနှစ်ဆင့်ကိုလည်း သွားလည်လို့ ရပါတယ်။
ကန်ခုနှစ်ကန်က အဆင့်ဆင့်ရှိနေတာပါ။ ဒါကို Google Map ကနေကြည့်ရင်တောင် လှနေတာပါ။ ကန်ခုနှစ်ကန်လုံးကို မြင်ရတယ်။ တစ်ကန်ချင်းစီကလည်း အရမ်းလှပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်တဲ့ မမတွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ နေရာပါ။
ပြီးရင် ကမ္ဘာကျော်ကယန်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာ ပန်ပက်ရွာကိုလည်း သွားလည်လို့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီရွာက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် သီးသန်းလုပ်ထားတဲ့ရွာပါ။ ရွာကအစကတည်းက ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ခရီးသွားတွေအတွက် သေချာလုပ်ပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ အဲဒီရွာက အိမ်တွေမှာ ထမင်းချက်စားတာ တနေကုန်သူတို့နဲ့ ကျေးလက်အလှတွေကို ခံစားရင်းဖြတ်သန်းလို့ ရပါတယ်။
အဲဒီရွာက ကယန်းလက်ယက်ထည်တွေ ရိုးရာပစ္စည်းတွေလည်း ရောင်းပါတယ်။
နောက်ထပ် အံသြမင်သက်စေပြီး ဗဟုသုတရတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သွားလည်လို့ ရပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်အတွက် အဓိကကျတဲ့ ဘီလူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့ လောပိတရေတံခွန်ပါပဲ။ သက်တမ်းရင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှှုတွေကိုလည်း သိနိုင်ဖို့လေ့လာဖို့ဆန္ဒရှိရင်လည်း ရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူအထောက်အထားတော့ လိုပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်ကို ခရီးသွားဒေသအဖြစ်မြှင့်တင်ဖို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် လေးနှစ်လောက်အတွင်းမှာ ကယားကလည်စရာနေရာတွေများပြီး ကယားရဲ့အလှကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသာမက ကမ္ဘာကိုပါ သိလာစေပါတယ်။
Previous articleMyanmar to Introduce MSME Master Plan
Next articleGoldman Sachs Is in Talks to Settle Malaysia Fund Scandal